Zam (@Zam_ZA)'s conversations - Wattpad
Jul 15, 2019 02:55AM
Ph ပျက်သွားတာ ပြန်ကောင်းတော့ Email နဲ့ password မေ့သွားလို့ Zam အကောင့်တွေနှစ်ခုလုံး တစ်ခုမှဝင်မရတော့ပါဘူးရှန်!  ^^
နိဂုံးချူပ်​က​တော့ ကိုယ့်​အရည်​အချင်းကိုသိပါလို့  ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ်ကျ မသိဘဲနဲ့ လောဘက ကြီးချင်ကြတယ် နည်းနည်း​လောက်​ ရှက်​တတ်​​စေချင်​တယ်​ ငါကဒီ​လောက်​ထိုက်​တန်​လားဆိုတာ ၀ယ်တဲ့သူေ​တာ်ေ​​တ်ာများများကလည်း​​လူကြီး​တွေမသိ​အောင်​တိတ်​တိတ်​ပုန်းဝယ်​ကြတဲ့သူ​တွေချည်းပဲ ​ပြောချင်​တာက လူကြားသူကြားထဲ​တောင်​ထုတ်​ဖတ်​လို့မ​ကောင်း ​​အောင်​တန်​ဖိုးမရှိတဲ့စာ​တွေပဲ (◠‿◠) ​ဘေးက​နေမြင်​​နေရတဲ့သူ​တောင်​အစားရှက်လို့ အဆဲခံရမှာသိသိကြီးနဲ့လျှာရှည်​ပြ​နေတာ ဒါ​ကြောင့်​မို့​ပေါစာ​တွေရပ်​တန်းကရပ်​​ပေးကြပါလို့ ​ပေါစာ​တွေ ရပ်​လို့က​တော့မရဘူးဒီလို​တွေပဲ​ရေးတတ်​တာဆိုလည်း လုပ်​​တော့မစားကြပါနဲ့​တော့ ယူတို့အစားရှက်​လွန်းလို့ပါ≥Ö‿Ö≤
@APawSarPayAnti  အမှန်ပါပဲဗျာ အရင်နာဆုံးကတော့ child sex abuse ကိုအားပေးတဲ့ဟာတွေ ၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်နေတာပဲ
@APawSarPayAnti ထပ်မပြောပါနဲ့တော့ မတန်ဘူးလို့ထင်ရင် မဖတ်ပါနဲ့ သာသာတွေကိုထပ်စော်ကားမနေဖို့ ပြောချင်တယ် ဒီထက်ဆိုးလာရင် လူမှုရေးနားမလည်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါမယ်
အခုတ​လော wattpad က နာမည်​​ကြီး author​ တော်​​တော်​များများ စာအုပ်​​တွေ ထုတ်​ကြ​တော့ ပထမဆုံး​ဈေး​တွေကြည့်​ပြီး​တော်​​တော်​ကိုလန့်​သွားရတယ်​ သူတို့စာ​တွေက ဒီ​လောက်​အထိတန်​သလား​ပေ့ါ
ဂျူး ရဲ့စာအုပ်​​တွေ​တောင်​​မှပဲ အမြင့်​ဆုံး၄၅၀၀ မြသန်းတင့်​ရဲ့ သုခမြို့​တော်​လိုစာအုပ်​မျိုးမှ ၅၀၀၀ပဲရှိတာကို ဒီwpကစာအုပ်​​တွေက ၅ထောင်၆ထောင်​ပေးဖတ်​ရ​အောင်​​ ​​ကောင်းလား​ပေါ့ ဒါေ​တာင်​မှအဖုံး​လေးပဲကွဲပြီးversionအမျိုးမျိုးနဲ့က​လေး​​​တွေအ​ပေါ်လုပ်​စား​နေတာမပါ​သေးဘူး ​ဈေးနှုန်း​လေး​တွေတင်​ယှဉ်​ကြည့်​​သေးတာ ယှဉ်​ရတာ​တောင်​အားနာရပါတယ်​
စာ​ရေးဆရာကြီး​တွေကို စာအုပ်​တန်​ဖိုးချင်းမှမတူပဲ ​
နောက်​ပြီးဇာတ်​လမ်းဇာတ်​ကွက်​လည်းမရှိ ဒီဇာတ်​​ကောင်​နှစ်​ဦးကြားပဲလှည့်​ပတ်​​​နေပြီး နောက်​ ​ကောင်​မ​လေးရှိတဲ့​ကောင်​​လေးကိုမှပြိုင်​လု​ ​မျက်​ရည်​ချူကြ uke​တွေကိုအလွန်​တရာမိန်းမ​ဆန်​​ပေး ဒါ​တွေပဲ ဒီလို​တွေချည်းပဲ ဒါ​တောင်​ series ကရိုက်​ဦးမှာLOL အခုLGBT စာ​ပေကလည်းမြန်​မာ​ပေါကားဆန်​ဆန်​​တွေကများတာပါပဲ စာအုပ်​​တွေထုတ်​ပြီးမတန်မဆ​လုပ်​စား​နေတာကြီးကို​တော်​​တော်​မှကိုသ​ဘောမကျဖြစ်​​နေပြီ
​wattpadမှာရေးချင်​ရာ​ရေး​​ ရေးချင်သလိုေ​ရးတာက ကိုယ်​နဲ့ဘာမှမဆိုင်​​ပေမဲ့ ဒီမ​ကောင်းမကမ်း​တွေနဲ့ပဲ ပိုက်ဆံရှာပြီး ​ဂျင်းထည့်​​နေသလိုခံစားရလို့  အခုဟာတွေက လူပိန်းကြိုက်မယ့် clicheတွေကိုပဲ ဖန်တစ်ရာတေအောင်ရေးပြီး ဘာအတွက်​မှအကျိုးမရှိတဲ့စာ​တွေ  ​​LGBT အသိုက်အဝန်းအတွက် စာရေးမယ်ဆိုရင်လည်း အကျိုးတကယ်ရှိမယ့်စာမျိုးကို ရေးစေချင်တာ အခုကျစာအုပ်​ထုတ်​တဲ့လူထဲမှာကိုက gay​ကိုလူ​တွေဆိုရွံတယ်​​လို့profileမှာ​ရေးဖူးတဲ့ authorမမက အခုကျgayစာအုပ်​​ရေးပြီးပိုက်​ဆံရှာ​ တရား​ကျဖို့​ကောင်းလိုက်​တာ ​
စာအုပ်​ထုတ်​ပြီဆိုကတည်းက စာ​ရေးဆရာဖြစ်​ပြီပဲ​လေ အဲ​တော့ ​ရေးတဲ့သူ​တွေက ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို သူများကိုပညာ​ပေးဖို့အရည်​အချင်းအပြည့်​ရှိပြီလို့ထင်​သလား  အခုအဲစာအုပ်​​ထုတ်​​နေတဲ့သူ​တွေကြည့်​ပြီး စာ​ရေးဖို့ကအဲ​လောက်​လွယ်​သလား​ပေါ့ သူများကိုအသိပညာ​ပေးဖို့ကိုယ်​တိုင်​ကကျ စာလုံး​ပေါင်းသတ်​ပုံမမှန်​ ပုဒ်​ဖြတ်​ပုံဒ်​ရပ်​ကအမှားနဲ့ ဒါ​တောင်စာ​ရေးဖို့လမ်းညွှန်​​တွေဘာ​တွေက​ရေးလိုက်​​သေးတာ အံမယ်​ (◑_◑)ဒီကြားထဲ ကဗျာဆရာလိုလိုဘာလိုလိုလူ​​ကလည်း wpမှာ​တော့မ​ရေးဘူး စာအုပ်​ထုတ်​ရင်​ကျ​တော့ဘယ်​​နေရာ​ကနေ​နေကပ်က​ပ်​ပါလာမှန်းမသိဘူး≧◔◡◔≦
ဂျူး ပါလာလို့ ပြောရရင်
ဆရာမရဲ့ အမှတ်တရ ဂယက် ဘယ်လောက်ကြီးခဲ့လဲ နင်သိလား
@APawSarPayAnti သူများ wallထဲလာပြီး ဖင်လာယား
ကျွန်တော်လေ စာရေးသူရဲ့ဝတ္ထုတွေကို အခုမှဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ခံစားရလို့ ကြည်နူးပြီးရေးမိတာပါ တကယ်သဘောကျပါတယ် Yuri Yaoi အကုန်လုံးသဘောကျတယ် normal မဖတ်ပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ normal လေးတွေကိုတော့ချစ်လို့ဖတ်တယ်နော် အားပေးနေပါတယ်ဗျ
ချယ်ရီခြွေတဲ့ပိတောက် ကလေ စာတိုလေးပေမဲ့တကယ်ခံစားရတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်သလိုပဲ
@ohalyoung ကျေးဇူးတင်ပါတယ်  အခုပြန်ဖတ်ပေးလို့ တစ်နှစ်အကြာက ကလေးလေးကို
@HunhanTD update စမ်း
မြေသင်းနံ့က Yuri. မလား ကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့နားမလည်လိူ့ပါ သေချာဖတ်ကြည့်မှ မိဘကသားလိုချင်လို့ မအောင်အောင်ကို ယောက်ျားလေးပုံစံနေခိုင်းတာလား အဲလိုမျိုးကနေ မြကိုချစ်ပြီးသူ့ဘဝကိုလက်ခံပေးလို့ ပျော်သွားတယ်ပေါ့ ကျွန်တော်ပြောတာမှားခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော်သေချာမသိလို့ပါဗျ ကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပေးပါဗျာ
@Zam_ZA ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ သဘောကျလွန်းလို့ပါ စာရေးသူကိုအားပေးနေပါတယ်
@ohalyoung အယ်.... တကယ်တော့ စာဖတ်သူက ကြိုက်သလိုမြင်ခွင့်ရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ခံစားမိသလိုပေါ့ ။ ပြောတာမှားတယ်မရှိသလို တောင်းပန်စရာမလိုဘူး ။ zam ရဲ့ ရေးသူဘက်ကအမြင်ဆိုရင်တော့ yuri ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အောင်အောင်ကမိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး transgender womanပါ ။ ယောကျာ်းပေမယ့် မိန်းမအဖြစ်သူနေထိုင်ပြီး မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ချစ်သွားတာပါ
@Loon-L ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ ficတစ်ပုဒ်လေ။ ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျ သားသားမီးမီး မွေးပြီးမှ Endingဖြစ်မှာ သိပေမယ့် စောင့်နေမိတဲ့ ficကလေး ပျောက်သွားလို့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး သာသာရာ....:3
@ryoko_j just wait for me ...